Fiarahana am-pitiavana teny amin’ny Gara - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fotoana miavaka ho an’ny mpifankatia rehetra ny 14 febroary. Isan-taona izany. Tsy niavaka tamin’izany ity taona 2015 ity ho an’ireo mpifankatia eto Antsirabe. Ny eto Antsirabe dia ny gara no toerana ahitana be tanora mpifankatia miaraka, “mpampiaraka” hoy ny fiteny mahazatra, rehefa St Valentin toy izao. Vao mainka betsaka izy ireo satria vitsy ny hetsika nentina nanomanana izao andro izao. Ny Atlas Club Antsenakely irery no nampanao fifaninanana sy fampisehoana lamaody tamin’ny janoary lasa teo, ary ny 14 fevrie antoandro nanomboka tamin’ny 2 ora ny fety karakarain’ny Oniversite ASJA. Fotoana hanararaotan’ny mpivarotra voninkazo ihany koa ny St Valentin. Arakaraky ny lokon’ilay voninkazo no mahalafo azy. Telo arivo ariary ka hatramin’ny roa alina ny vidin’ny fehezam-boninkazo iray. Betsaka anefa ireo mpividy saingy vitsy kosa ny mahatakatra ny tena tsara hatao fanomezana. Misy dikany daholo ny loko araka ny voalazan’ity mpivarotra voninkazo ity, ary ny raozy no efa mahazatra ny olona raha ny amin’izany. Tsy diso anjara amin’ity fety ity ihany koa ireo mpanao sy mpivarotra mofomamy, ka ao ireo nametraka kaomandy mialoha ary ao ireo izao an-katoky ny fety izao vao mandeha miantsena, toy ny any amin’ny La Gastro Pizza sy ny karazany. Somary ilaharana ny fivarotana ny 13 ary indrindra ny 14 fevrie ka izany no antony hamandrian-toerana dieny mialoha.
St Valentin an’ny tanora
Tsikaritra, raha ny eto andrenivohitr’i Vakinankaratra, fa saika tanora avokoa no tena mianoka amin’izao fety izao sy manara-po ; tsy dia maro ny mpivady efa nahazo taona no hita miaraka mba manafana indray ny fifankatiavana. Misy fy kokoa ny fiarahana rehefa miaraka misotrosotro, raha ny filazan’ireto mpifankatia maromaro manao latabatra boribory ireto, mirevy sy mifampizara ny mahafinaritra. Samy manana ny fomba hanatanterahany ny andro androany daholo ny olon-droa, na dia manjombona sy mangatsiaka aza ny andro. Nisafidy ny hiataka kely ny renivohitra ihany koa ny sasany, naman’ireto andiana mpifankatia vitsivitsy ireto, ka lasa nitsangatsangana any Tritriva sy Andraikiba izay rano manana tantara mikasika ny mpifankatia ihany koa.
Somebiseby aok’izany ny mpifankatia rehetra ny 14 fevrie eto Antsirabe manoloana ny gara fa hifanolotra fanomezana sy hanafana ny fifankatiavana. Mifampiondakondana etsy sy eroa, mazava ho azy fa mamy ny fiarahana, ka hifanadino disadisa fa hihavao indray fifandraisana. Ny raozy mena no betsaka mpifanolotra teto amin’ny gara, midika fitiavana mivaivay ao am-po ny loko mena ary tsy fivadiana amin’olon-tiana. Ny tena fitiavana hoy ity tovovavy iray ity dia samy manome sy manolotra fanomezana avokoa na ny an-daniny na ny an-kilany rehefa andron’ny mpifankatia ohatra izao. Vola roa alina ariary izay no lanin’i Tolotra hanomanana ny fanomezana hatolotra ity fofombadiny ; atao tampoka aminy hoy izy ny fanolorana, ary na i Tolotra ihany koa aza tsy mahalala izay mba homanin’ny fofombadiny ho an’azy. Fa na tsy misy aza ny fanomezana, dia tokony tsy atao hampiova ny fifankatiavana izany, satria mba marika azo tsapain-tanana fotsiny iny, fa ny ao anaty no tena izy. Ny nampalahelo anefa dia ity vehivavy efa manam-bady nandeha irery miaraka amin’ny zanany mianadahy kely, nisarahan’ny vadiny raha vao tonga ny St Valentin. Nanjavozavo taminy ny tena anton’ny fisintahan’ny vadiny tampotampoka teo. Mila mitandrina araka izany ny mpifankatia fa tsy lavitra ny mpanakorontana sy ny mpandrebireby ny fifankatiavana. Saingy tsy hafaliana ho an’ny tena fa ny fitiavana tsy te-hanan-dratsy, satria ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Ny fanomezana hifanoloranao amin’ny olon-tianao anio dia tsy kilalao sy fahafinaretana fotsiny fa fanombohan’ny fandraisanao adidy aman’andraikitra amin’ny ho fiainanao rahatrizay. Fa sao nanolotra tsy am-piheverana ny raozy mena ka ho tsy ho mena mivadika é.
Isan’ny fanontaniana manitikitika hatrany ny hoe : “fetim-pinoana katolika izany St Valentin izany ka firy ny mpifankatia no mahatsiaro mitodika manokana any amin’Andriamanitra ? Fa moa ve tsy izy no tena Fitiavana ?” Fanontaniana mipetraka izany. Ny mpifankatia no tompon’ny valin-teny.